Gaas iyo Qeybdiid oo markii ugu horreysay wadahadal ku yeeshay Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaalkacyo – Mareeg.com: Madaxweynayaasha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Galmudug Cabdi Qeybiid ayaa manta kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee xarrunta gobolka Mudug.
Kulanka oo ka dhacay guri oo Gaalkacyo ka deganyahay C/weli Gaas ayaa looga hadlay arrimaha amaanka gobolka Mudug iyo xiriirka labada maamulka ee Puntland iyo Galmudug.
Kulanka dhex maray labada madaxweyne gobol ayaa ahaa mid albaabadu u xirnaayeen, waxeyna si wadajir ah ula hadleen warbaahinta kadib markii shirku dhamaaday.
Gaas iyo Qeybdiid ayaa sheegay iney ka wada hadlee sidii labada maamul isaga kaashan lahaayeen arrimaha amaanka, maadaama ay deris yihiin.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas ayaa warbaahinta u sheegay inay kulankooda kusoo qaadeen sidii loo adkayn lahaa xiriirka labada maamul, sidoo kalena looga wada shaqayn lahaa adkaynta ammaanka, kocoba dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug, Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa dhankiisa tilmaamay in ay si qota dheer uga wada hadleen arrimo badan oo ay ugu muhiimsan tahay adkaynta nabadgalyada iyo in laga hortago falalka amniga wax u dhimaya.
Ugu danbayntii labada masuul ayaa si wada jir ah u sheegay in wixii farsamo ah ee ku salaysan sidii loo dhaqaajin lahaa arrimaha ay ka wada hadleen loo saaray guddi ka shaqeeya oo hawsha halkaa kasii ambaqaaday, islamarkaana gudigaasi la samayn doono sida ugu dhakhsaha badan.
Waa markii ug horreysay ee ay kulan yeeshaan labada madaxweyne ee maamullada Puntland iyo Galmudug C/weli Gaas iyo Cabdi Qeybdiid. Labada maamul ayaa dhawaanahan isku soo dhawaanayey kadib khilaa siyaasadeed iyo mid beeleed oo u dhaxeeyey sanadihii lasoo dhaafay.